DEG DEG LIVE Baabur Laga Gubey Somaliland Sanaag Dagaal Qasaare - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeWararka MaantaDEG DEG LIVE Baabur Laga Gubey Somaliland Sanaag Dagaal Qasaare
July 27, 2019 marqaan Wararka Maanta 7
Wararka Hada Anu helayno Ayaa Sheegaya Inay xabada Yara Joog satey Sadaalo ilaa Xalay saqdhexe ka socdey Gobolka Sanaag oo u Dhexeeya Ciidamada Caare Iyo Soomaliland iyo waliba Puntland oo dhankeeda Ciidamada Puntland ka Qeyb Qaateen.
Goordhow Saraakiil ka Tirsan maamulka Soomaliland Ayaa Sheegay Inay iska caabiyeen dagaal ciidamada Puntland oo tageeraya Caare Kusoo Qaadeen.
Wararka Madaxa banaan Ayaa sheegaya Inay Ciidamada Caare ka Gubeen Soomaliland Hal Baabur inkasta oo Ana La Xaqiijin Karion Qasaaraha rasmiga.
xaalada hada Ayaa Wali kacsan Inkasta Dagaalka Cuslaa yara Istaagey.
DHAGAYSO:Wiil uu Adeer u yahay Cabdullaahi Yuusuf Yey oo codsi u diray Puntland.
Dadkan aad magacyada ukala yeelaysan waa dad somaliyed oo muslimiin ah waxay isku laynayaan waa dhul somaliyed oo xor ah, waxa wax laga xumaado ah in maanta oo la joogo 2019 dhallin yaro somaliyed inta hub laysugu dhiibo dhiiggoda odoyaal ku qayilaan, maamul beeleedyada iduur iyo majeerten midkoodna wakiil kama ahan degaannada SSC waxay isku dilyaanna waa dulmi iyo doqonnimo, dhul ninkiisibaa iska leh, degaannada dadkii lahaa way joogan taa halla ogaado.
War haddii ad tahay nin isdifaaci kara ma dhulkaagay ku diriri lahaayeen dadkaad sheegtay?In ay dhulkaaga ku diririraan dadaan u dhalan waxay timid markaad adigii waxba istari weyday oo uu dhulkaagii noqday BAYLAH.Haddii ad tahay nin raga yaa dhulkaaga u soo hanqal taagi lahaa?Hase ahaatee maanta cidna saas kuu eegi mayso oo waaba lagugu qoslaa markii lagu soo fiiriyo oo la yiraahdaa oo kaasina ma dadbaa?Meel ay ku diririrayaan dadaan u dhalan soo ma aha waa meel an cidina lahayn?War maxaa dhulkaaga muran iyo isku qabsi galiyey?Soomaaliya oo dhan dhulkaaga kaliyey isku haystaan dadaan shaqo ku lahayn.Intaasaa kugu filin.
Wacdigii shabaab unma baahnin, kaagan meeshaan wax ku qorey, Munaafaqada naga daa. wxii xun iyo Musa shaani iyo waliba kuwa ku daba tukada, waa la garaacayaa.
axmed: mooryaan inaad tahay ayaad caddaysay,dagaalka halkaa Ka socdana waa mid jaahiliya oo innaba aan qiil loo helayn, ma waxaa ku dhibtay dhiigga muslimiinta walalaha in lakala badbaadiyo, adigaa gurigaaga gubay waxadna doonaysaa inaad gubto gurysha somaliyed.
Horta ducada Illahay ha’inaga wada aqballo. Sanaag iyo Dhulka Soomaali oo dhami degto inta xurguf ama shaqaaqo ka taagan tahay Illaahay haka qaboojiyo oo haka dul qaado dhibta. Is Afgarad iyo walaaltinimona haku dhameeyo.
Waa ta SSC. SSC waxey kala yihiin Sool, Sanaag iyo Togdheer. Sadexda Gobolba waa la wada degaa. Waa dhul aynu wada leenahay oo inaga dhexeeya. Sinaba aniguna kaagama Sheehan Kari adna iigama sheegan kartid. Waxeyna ka wada tirsan yihiin Somaliland.
Waan ogahay oo adiga iyo kuwa kula midka ah waxa ay idiinku badisaa Qabiilka. Qaranka ayaa kun jeerse ka wanaagsan oo ay kuugu Badin doontaa. Waa hadaad indhihii lagu arki lahaa lahaan leheyde. Waanad ogeyne marka ay Gaadho ismaamul Magaalo iyo tuulo walba inta degta ayaa xukunkeeda Hoose leh. Dawlad degaanka dadka ka qeyb gelayaa waxay kasoo dhex baxayaan dadka degen goobtaas. Dad kale oo magaalooyin kale laga soo waarideyaa ma jiraan. Better yet, dadka laftirkiisa ayaa dooranaya kolba qofkey rabaan inuu matalo. Policeka iyo askartu waxey yihiin Isla dadka meesha u dhashey. Xaajinku goobtu waa qof deegaanka u dhashay ama mid aanan kanfogeyn oo xirfadii leh. Dawlada Dhexe iyadu waxey leedahay xukunka guud. Dawlad walbaaba tu Hoose ama tu sare tey doontoba ha ahaatee,wanaageeda iyo xumaanteeda waxa la arkaa kolba sidey wax u qabato. Hadaba Qaranimadu waa muhiim. Horumarna wey horseedaa. Maanta lama joogo wakhtigii lagu doodi lahaa Qabiilkeyga iyo kaaga. Waxa la Joogaa markii la eegi lahaa sideynu inteenan Illahey is badey wax isula toosin karnaa. Anna dhaliisheyda waan qaadan, adna taada qaado. Xukunkana dee cidi kaama xigtee kaalay oo dhinacaaga qabso oo xafiiltanja siyaasada ha galaan inta iska xejin kareysaa. Sidaas ayay labadeenaba inoogu Badin doontaa hasheena Shan Ka Room.
Cisho dhaweyd ayaad iga cabaneysay markaan hadalkaaga daalinimo ku tilmaamay.
Hadaba aan kunweydiiyee waxaad wado ood ka hadleysaa miyaanay daalinimo ahey? Sanaag yaa dega. Sow Isaaq iyo Daarood ma wada degaan? Dhul la wada dego oo dadka wada degaana adiga intey doonaan iska kaa xigaan oo iskaga kaa dhow yihiin ayaad afaarihiisa soo geleysaa.
Ood weliba si jaahilnimo ah uga hadleysaa. Ood nin ku xagxaganeysaa. Ood Qabiileyneysaa.
Waar halagu dagaalamo Sanaag ama halagu rogmado. Adiga shaqadaasi kuuma taalo.
Daalinku waa diradiraare, shaki geliye, munaafaq hadh iyo habeen naxli ka shaqeeya. Kolkaas hadaad Atoore tahay beryahan waxaad lasoo baxdey inaad afka labadiisa daan kolba mid ka hadasho. Marna wanaag, marna naxli. Mar kuwa wax isku diraya ayaad waanisaa, marna adaa wax isku diraya. Marna adoo Qabiil dhan caayay ama aflagaadeynaya ayaad intaad u dhameyso oo wax walba ku tidhaa ayaad kama dambeysta odhaneysaa inta yar baan u jeeda ee inta kale qabiilkaasi waa wanaagsan yahay. Tusaalaha ugu fiican een taas kaa siin karaa waa, adiga oo guri qoys ah soo gala oo Aabihii, Hooyadii iyo Caruurtiiba wada uleeya oo garaaca. Markaad kala daasho oo iyagoon meel la taabto laheyd aad ku tidhaa, gebigiin ma wada xumidin. Kaa yar ee nejiska ah dartiis ayaan idiin wada karbaashey. Xeydha jecli, beerka jecli cidi kaa yeeli meyso sxb.
Ka hadal wax san ama xishoo oo naxliga jooji.